Resadresaka nifanaovana tamin'i Jaime Rojas Hernández - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Resadresaka nifanaovana tamin'i Jaime Rojas Hernández
14 / 09 / 2019 13 / 09 / 2019 ny Antonio Gancedo
Atoa Jaime Rojas Hernández dia Dokotera momba ny fahalalana ara-batana ary mpikambana avy amin'ny fikambanana Canarian ho an'ny fampandrosoana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fikarakarana.
La Fikambanana Kanaria momba ny fampandrosoana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fikarakarana izay niditra tao amin'ny 2 World March for Peace and Nonviolence, dia fikambanana tsy mitady tombontsoa izay ny tombotsoany dia ny manaparitaka ny tombotsoan'ny Fandraisana amin'ny ankehitriny.
Azontsika vakiana ao amin'ny tranokalan'ny fikambanana fa amin'ny voalohany dia ny tanjony dia ny hanitatra ny azo ampiharina amin'ny tombontsoan'ny saina ho an'ny tsirairay sy ny fiaraha-monina:
“NITANAO TAONA 6 ANY FANAVAOZANA TSY MISY AZONAO
Ny olona sy ny fiaraha-monina mila mahalala ny tombontsoa ho an'ny fahasalamana iraisana izay afaka manintona ny saina ho amin'ny ankehitriny.
Ny iraka ataontsika dia mifantoka amin'ny famolavolana fandaharan'asa fikarohana sy fampiofanana izay manatsara ny fahasalaman'ny tsirairay sy ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fomba fiainana amin'ny zava-misy, tsy misy fitsarana an-tendrony, amim-pitiavana sy ny fanajana ny fiainana amin'ny fisehony rehetra. ”
Amin'ny fotoana hamaritana ny hetsika nataon'ny Fikambanana Kanaria momba ny fampandrosoana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fikarakarana ho fanohanana ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana, dia namaly fanontaniana vitsivitsy i Andriamatoa Jaime Rojas, mba hahafantarany ny tombontsoan'ny fikambanany sy ny tombontsoany manokana amin'ny Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanam-bilona ary mifandraika amin'ny manaraka isika.
AG: Azonao atao ve ny manome famintinana fohy fohifohy momba ny fikambananao sy ataonao?
Atoa Jaime Rojas: Fikambanana ho an'ny fampandrosoana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fikarakarana dia ONG tsy mitady tombony atokana ho an'ny INVESTIGATE ary MAMPIASA FAMPIARANA NY soa azo avy amin'ny PRESENT CARE ao amin'ny fahasalaman'ny indostriansy sy ny SOSIALY.
AG: Azonao atao ve ny manazava ny antony, amin'ny maha fikambanana anao, hanatevin-daharana ny World March?
Atoa Jaime Rojas: Mahatsapa izany ho toy ny mila fanaparitahana izahay.
AG: Inona no holazinao amin'ny olon-kafa ny antony ilanao hiditra amin'ny 2 World March?
Atoa Jaime Rojas: Satria ny TANDRIAMANITRA dia zavatra antsika tsirairay avy ary tsy misy olona tavela ho tratrany.
Araka ny nolazainay, ny Fikambanana Kanaria momba ny fampandrosoana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fikarakarana, dia nanatevin-daharana ny World March.
Ny ekipan'ny Atitany ankehitriny dia mandray anjara amin'ny hetsika 3 tamin'ny volana martsa ho an'ny fandriampahalemana faharoa:
MANOTA NY RAFO
"MANOTA NY OLONA"
Free sy firaisan-kina miaraka amin'ny fivoriana telo!
Misoratra anarana amin'ny Mamorona fampianarana milamina
Ilay Fiadanana Fiadanana
Fametrahana ny boky nomerika (Espaniôla sy anglisy) mitondra ny lohateny: "The Peace Switch". Azo alaina maimaimpoana amin'ny teny Espaniôla izy io: Ilay Fiadanana Fiadanana. ary amin'ny teny anglisy: Switch-for-fandriampahalemana.
Ahoana ny fomba hivoarana amin'ny fandriampahalemana ao anatin'ny tontolo mifanohitra?
Fihaonana mifanatrika mivantana amin'ny Las Palmas de Gran CanariasAhoana ny fomba hivoarana amin'ny fandriampahalemana ao anatin'ny tontolo mifanohitra?”, Nampianarin'i Jaime Rojas Hernández Dokotera momba ny Siansa Ara-batana.
Andro: 14 Oktobra 2019
Ora: 19: ora 00
Fandraisana: «Club La Provincia» Adiresy: C / León y Castillo, 39 Bajo, 35.003
Las Palmas de Gran Canaria. Espaina
Ankasitrahantsika ny fijerinao manokana Atoa Jaime Rojas ary ny fankatoavana io olan'ny Humanista io amin'ny ambaratonga manokana ary manitatra izany amin'ny Fikambanana izay misy azy.
Farany, misaotra antsika M. Rosario Lominchar ny fanelanelanana amin'ny fihetsika.
Fanehoan-kevitra 1 amin'ny "Resadresaka nifanaovana tamin'i Jaime Rojas Hernández"